Wire Mesh Container Factory - China Wire Mesh Container mpanamboatra, mpamatsy
Warehouse mivalona vy Wire harato vy Cage fitoeran-javatra fitahirizana
Warehouse Fold Steel Wire Mesh Metal Cage Storage Container, dia karazan-kaontenera indostrialy malaza miaraka amin'ny asan'ny paleta sy tranom-borona. Izy io dia vita amin'ny vy vita amin'ny tady vy miaraka amin'ny tapany ambany amin'ny fanohanan'ny vy vy endrika mahatratra ny fampiharana ny rafitra. Ny fahafahan'ny enta-mavesatra dia mety hahatratra 500-1700KG. Product Detail Wire Mesh fitoeran-javatra dia fantatra ihany koa amin'ny cage cage, cage fitehirizana, cage pallet, vy avo lenta nohamafisin'ny hatsiaka avo lasina mangatsiaka, fahafaha-mavesatra, goavambe, ...
PET preform Wire Mesh Cage azo adika vy vy fitoeran-javatra
PET Preform fitoeran-javatra dia natao ho an'ny Coca cola, miaraka amin'ny fantsom-bozaka malefaka sy zinc. Izy io dia azo stackable sy azo ovaina, mora ampiasaina. Natao ho an'ny indostrian'ny preform PET, ho an'ny fitehirizana sy ny fitaterana. Miaraka amin'ny ravina PP ao anatiny, ataovy madio sy malama ny tranom-borona ho an'ny PET Preform. Manana tahony mihidy tena izy, ny entana mavesatra indrindra dia mety hahatratra 800KG. Ampiasaina be amin'ny indostrian'ny alikaola sy fanodinana PET. Detail Product Product PET Preform Wire Mesh Cage Size L1200 * W1010 * H1200 Wire Mesh 62 * 125mm Weig ...
Fantson-tsolika vita amin'ny indostrialy mitazona Wire Mesh miaraka amina PP
Ny fitoeran-jiro tariby dia antsoina koa hoe tranom-borona fitehirizana sy tranomaizina lolo. Izy ireo dia karazana kaontenera lozisialy manan-danja amin'ny fitehirizana sy ny fitaterana. Izy ireo dia manana tombony amin'ny fahaiza-mitahiry raikitra, ny fametahana tsara, ny fitehirizana indray mipy maso, ary ny fanisana isa mora, ary koa ny fanatsarana ny fampiasana mahomby ny toerana fitahirizana. Antsipirian'ny vokatra Karazana vokatra PET mialoha na fitehirizana satroka plastika L1200 * W1000 * H1140 Wire Mesh 50 * 100mm Weight / Set 74KG hatevin'ny 5.0mm Load Capacity 500 ...
Euro Style Welded Woldable Wire Mesh Container ho an'ny indostria Recycle
Euro Style Welded Foldable Wire Mesh Container, elektro nandrisika tamin'ny famoahana 500KG -1700KGS. Miaraka amin'ny 8000 napetraka isam-bolana ny fahaizan'ny famokarana ary tena mivaingana ny vola azo avy amin'ny fizahana. Afaka manolotra habeny sy endriny namboarina miaraka amin'ny sary ihany koa. Product Detail Wire Mesh fitoeran-javatra dia fantatra ihany koa amin'ny cage cage, cage fitehirizana, cage pallet, vy avo lenta nohamafisin'ny hatsiaka avo lasina mangatsiaka, fahafaha-mavesatra, henjana ary fitaterana mety, azo ampiasaina indray hampihenana ny fitahirizana. ..
Kitapo vy vita amin'ny vy azo potika
Product Detail Azo vonoina sy azo fehezina vy vy Wire harato Pallet fitoeran-javatra, vita amin'ny tariby vy karbaona Q235 ambany, fitoeran-kazo iraisam-pirenena mahazatra io. Ny kaonteneran'ny Wire Mesh dia fantatra ihany koa amin'ny tranom-boaloboka, tranom-borona, tranom-pallet, vy avo lenta nohamafisin'ny hatsiaka avo lenta mangatsiaka, fahafaha-mitondra, henjana ary fitaterana mety. Anaran'ny vokatra Wire harato pallet cage Size namboarina Wire Mesh 50 * 50mm; 50 * 100mm; 100 * 100mm matevina 4.8 ~ 6.0mm Load Cap ...